August 4, 2017 Ram Kumar Uncategorized
चितवन । मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएर स्थगित भएको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा आज मतदान हुँदैछ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि एमालेका देवी ज्ञवाली र कांग्रेस–माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल यतिबेला चुनावी रस्साकस्सीमा छन् ।
कसले जित्ला भरतपुरमा ?
आज १९ नं. वडाको मतदान भएपछि यो वडा सँगै २० नं. वडाको मतगणना गर्न बाँकी हुनेछ । यसअघि १८ नं. वडासम्म मतगणना भएको छ । जसमा एमालेका ज्ञवाली रेणुभन्दा ७ सय ३३ मतले अघि छन् । देवीको ४० हजार ९८० मत रहेको छ भने रेणुको ४० हजार १९६ मत छ । यस्तोमा १९ र २० नं. वडा कांग्रेसको पकड क्षेत्र मानिन्छ । वडा नम्बर १९ मा ३ हजार ७ सय ९७ मतदाता रहेका छन् । जसमा रेणुको पक्षमा करिब ७० प्रतिशत मत आउनुपर्ने हुन्छ । यसो भएमा २० नम्बर वडामा पनि केही मतान्तरले रेणुको पक्षमा मत आउने आँकलन छ । र, उनले चुनाव जित्नेछिन् ।
कसरी आउँछ रेणुलाई भोट ?
जेठ १४ गते मतपत्र च्यातिनुअघि भरतपुरको माहोल बेग्लै थियो । रेणु दाहाल देवीभन्दा पछि परेको अवस्थामा वडा नम्बर १९ को मत पनि देवीकै पक्षमा देखिएको थियो । किनकि कांग्रेसको मत उनको पक्षमा परेको थियो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनलाई भोट नगर्ने जोकोहिलाई पनि पार्टीले कारबाही गर्ने बताइसकेका छन् । अर्कोतर्फ अब १९ नम्बर वडाबाट कसले कसलाई भोट हाल्यो भन्ने प्रष्ट छुट्टिने भएकाले पनि कांग्रेको भोट गठबन्धनलाई नै आउने देखिन्छ ।
त्यसैगरी त्यस वडामा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता संयुक्त रुपमा जनताको घरघरमा पुगेर भोटका लागि आगैह गरेका छन् । यसअघि रेणु दाहाललाई नजिकबाट नियाल्न नपाएकाहरुले पनि उनलाई चिन्ने अवसर पाए । किनकि देवी स्थानीय भएकाले जनताले उनलाई पहिल्यैदेखि नै नजिकबाट नियालेका थिए । रेणुले एक महिनासम्म त्यहाँको जनताको घरघरमा गएर आफ्ना एजेन्डा राख्नु, विभिन्न सभा, सम्मेलनमा भाग लिनु, ग्रामिण महिलाको हक–हितको पक्षमा आवाज उठाउनु, धान रोपाइजस्ता कार्यद्धारा जनतासँग नजिक हुन खोज्नु, जनताकै माझमा खानपिन तथा रात बिताउनु र कांग्रेस कार्यकर्तालाई कांग्रेस नेतृत्वसँगै रहेर भोटका लागि अपिल गर्नुले पनि रेणुलाई भरतपुरमा बलियो बनाएको छ ।
वडा नम्बर २० मा देवीको भन्दा रेणुको २०० देखि ५०० सम्म बढी मत आउने अनुमान गरिएको छ । किनकि यो क्षेत्रमा कांग्रेससँगै माओवादी पनि एमालेभन्दा बलियो छ । त्यसैले अब रेणुलाई देवीसँग रहेको ७३३ मतान्तर जसरी भएपनि शुन्यमा झर्नु छ । त्यसका लागि उनले झरेको मतको करिब ७० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि यदि दुई हजार मत झरेमा रेणुले एक हजार चार सय मत ल्याउनुपर्छ । त्यसो भएमा देवीको ६ सय मत आउँछ र रेणुले केही मतले लिड गर्छिन् । यदि ६० प्रतिशतसम्म मत आएको खण्डमा पनि रेणुले जित्ने चान्स कायम नै हुन्छ ।
के देवीले जित्लान् ?
देवी ज्ञवाली भरतपुरको मेयर बन्ने अब एउटै आधार छ । त्यो हो जनताको महानुभूति । वडा नम्बर १९ मा माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेको विषयलाई ईस्यु बनाएर एमालेले चुनावी प्रचार गरको थियो । त्यसैले देवीप्रति महानुभूति जनाएर उनको पक्षमा मत आएमात्र उनले जित्ने सम्भावना छ । नत्र वडा नम्बर १९ र २० मा एमाले कमजोर भएका कारण उनको सम्भावना निकै कम छ । जितका लागि देवीले १९ नम्बर वडाबाट करिब ५० प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।